Debian inozotsigira zvakare akawanda ekutanga masystem | Linux Vakapindwa muropa
Sam Hartmann, Debian mutungamiri weprojekiti, akaedza kugadzirisa kusawirirana maererano nekuendeswa kwepakeji yezvinyorwa sechikamu chekugovera. MunaJuly, timu inoona nezve kugadzirira zvatanga yakavharira kuiswa kwenyanzvi mubazi rebvunzo, sezvo pasuru iyi inopokana ne libsystemd.
Sechikonzero chekupunzika, pakanga paine kupokana neiyo systemd package uye njodzi yekutsiva libsystemd neimwe shanduro ye libelogind, iyo isingaenderane zvachose neraibhurari yezvinyorwa padanho reABI.
Pane elogind zvakakosha kuti uzive kuti inopa zvinowirirana nzvimbo kuti Gnome ishande isina kuisa systemd. Iyo purojekiti yakavakirwa sebazi re-systemd-logind, rakaburitswa mupakeji rakapatsanurwa uye rakachengetedzwa kubva kuiyi link kune iyo systemd zvinhu.
Iko kusanganisirwa kwema elogind kunopa yayo yega vhezheni yereibelogind raibhurari, iyo inotora pamusoro pemabasa akati wandei anopiwa ne libsystemd uye inotsiva raibhurari iyi panguva yekumisikidza.
Mupakeji, elogind inoratidzirwa seinopesana nemaraibhurari ehurongwa, asi zvakagadzirirwa kuti zvishande chete pasina systemd uye kunetsana ne systemd kunotobatsira nekuti hazvibvumidze iwe kuisa elogind nekukanganisa.
Kune rimwe divi, mune yazvino fomu, kuyedza kuburikidza neAPT kugadzirisa systemd kumisikidza vhezheni ne sysvinit uye elogind mhedzisiro mune yakashata system ne APT isingashandi. Asi kunyangwe nekubviswa kwechikanganiso ichi, shanduko kubva ku systemd kuenda kune elogind haigoneke pasina kubvisa nharaunda dzakaiswa kare dzevashandisi.
Iko Elogind vagadziri vakabvunzwa kuti vachinje eulogyd kushanda pamusoro peyakajairwa libpam-systemd, usingashandisi yayo libpam-elogind layer.
Iko shanduko kubva kune elogind kuenda ku libpam-systemd inokanganiswa nekushaikwa kwerutsigiro rwechirevo chemasangano, asi ivo vanogadzira elogind havadi kuzadzisa zvizere API kutevedzera uye kunyatso dzokorora zvese maficha e systemd seyegind anongopa mashoma mashandiro kuronga mushandisi anopinda uye hazvikurudzirwe kudzokorora ese masisitimu e systemd.
Kugadzirisa zvinhu zvehunyanzvi zvakatsanangurwa zvinofanirwa kugadziriswa padanho rekudyidzana pakati peboka rekuburitsa uye vanochengeta velogind uye systemd, asi mutungamiri weprojekiti akamanikidzwa kupindira nekuti zvikwata zvaisakwanisa kubvumirana, iro basa rekubatana rakashanduka rikaita kupokana uye mhinduro yedambudziko yakasvika kumagumo, mukati mese mativi emutemo nenzira yayo.
Zvinoenderana naSam Hartman, mamiriro acho ave kusvika padunhu rinoda vhoti yakajairika (GR, gumbeze resolution), umo nharaunda ichasarudza pane mamwe masisitimu ekutanga uye nekutsigira sysvinit neine elogind.
Kana vatori vechikamu veprojekti vakavhota kusianisa masisitimu ekutanga zvose avo vanoona nezvekuchengetwa vachabatanidzwa mukuyedza pamwechete kubatana dambudziko iri kana vanogadziridza vane basa vanozogadzwa kuti vashande panhau iyi uye avo vanovaperekedza havazokwanisi kudarika imwe nzira yekutanga, vanyarare, kana kunonoka kuita.
Parizvino, iyo repository yatove yakaunganidza gumi nemapfumbamwe mapakeji ayo anopa zvikamu zvebasa re systemd, asi usasanganise init.d zvinyorwa.
Kuti tigadzirise dambudziko iri, tinokurudzira kupa mafaera ebasa nekukanganisa, asi kugadzirira mutyairi uyo anoteedzera ega mirairo mumafaira aya uye inogadzira init.d zvinyorwa zvinoenderana nazvo.
Kana nharaunda ikafunga kuti Debian ine rutsigiro rwakakwana kune imwechete yekutanga system, ivo havachafanirwe kunetseka nezve sysvinit uye elogind, ichingotarisana neyuniti uye systemd mafaera.
Mhinduro yakadaro inokanganisa zvisizvo zviteshi zvisingashandisi kernel yeLinux, asi hapana madoko akadaro mufaira huru parizvino uye ivo havana chinzvimbo chepamutemo chekutsigira.
Kubatanidza kune systemd ichaomesa zvakanyanya shanduko mukutungamira kwekuparadzira kusimudzira mune ramangwana uye ichadzora kumwe kuyedza mumunda webasa kutanga uye manejimendi.
Mhinduro yega yega ine zvayakanakira nezvayakanakira, saka nhaurirano yakakwana yemakakatanwa ese uye anopokana anodikanwa pasati pavhota.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian inozotsigira zvakare akawanda ekutanga masystem
Saka hazvisati zviri chokwadi kuti ivo vachatsigira sysvinit zvakare !! Sezvo ini ndakazvinzwisisa, ivo vari kuzozviisa kune chidzidzo uye kuvhota !! Tichaona zvinoitika !!
Iyo Debian circus yatove "yakaratidza" neinoseka "sarudzo" yekutora systemd. Iye zvino havasi kuzodzokera kumashure, saka zvinokwanisika kuti "general vote" yakatoziviswa. Kwandiri, ramba uchibata ne systemd. Q vari kuzopedzisira vaturikwa iri imwezve yakaimbwa mhedzisiro.